काठमाडौं (अस) । बन्दाबन्दीकै अवधिमा अर्बौं लगानी थपेको सम्राट सिमेन्ट उद्योगले सोमवारदेखि क्लिंकर उत्पादन शुरू गरेको छ । २०७० मा रू. ७ अर्ब लगानी गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको सम्राटले थप लगानीबाट दैनिक ४ हजार ५०० मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन शुरू गरेको हो ।
लगानी बोर्ड नेपालले असार ५ गते सम्राटको थप रू. ८ अर्ब ५ करोड लगानी स्वीकृत गरेको थियो । हालसम्म उक्त उद्योगले सिमेन्ट मात्रै उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगका अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद तिमिल्सिनाले क्लिंकर उत्पादनका साथै सिमेन्ट पनि प्रतिदिन ३६ सय मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने तयारी रहेको बताए । हाल भने उद्योगको सिमेन्ट उत्पादन क्षमता दैनिक १ हजार ८०० मेट्रिक टन रहेको छ ।
पूर्ण क्षमतामै प्लान्ट सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उक्त उद्योगको प्रमुख बजार भने पश्चिम तथा सुदूरपश्चिमका साथै पोखरा, नारायणगढ र धवलागिरि क्षेत्र रहनेछ । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि ५०० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा १ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने कम्पनीको भनाइ छ ।